Andro: 12 Novambra 2019
Torkia Logistics Master Plan sy Logistics Foibe; Logistics Ireo faritra izay ataon'ny mpandraharaha maro ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny fitateram-pirenena sy iraisam-pirenena, lozika ary fizarana entana amin'ny foibe. Toerana ivontoerana lojika [More ...]
Construction mitohy Projects Miavaka Speed ​​Railway-dalana, any Torkia. Mitohy hatrany ny asa fanamboarana lalamby fanamboarana lalamby. Antalya-Eskişehir haingam-pandeha haingana Ny renivohitry ny fizahan-tany eto amin'ny firenentsika ary koa momba ny fambolena [More ...]
Torkia ny hafainganam-pandeha sy ny mahazatra Railway fanorenana; Ho fanampin'ny tetik'asa fanamboarana lalamby haingam-pandeha, dia mitohy hatrany ny fanamboarana lalamby haingana sy mahazatra. 1.480 km hafainganam-pandeha ambony [More ...]
Ny tontolon'ny varotra any Bursa, Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) sy ny Federasiona Federaly Rosiana Moskoa miara-miasa amin'ny fandaharan'asa fampiroboroboana ao Moskoa sy ny fihaonana amin'ny fihaonana an-tserasera miaraka amin'ny raharaham-barotra Rosiana [More ...]
Fandaharana ara-tsipika Metro Line OSB / Törekent; Ankara Metro Facility OSB / Törekent-Koru tsipika mandritra ny ririnina antoandro sy hariva hariva be ora (07.00-09.30 ary 16.00-20.00) 40 fiaran-dalamby sy andiany. [More ...]
Fanandramana fitsarana XHUMX ao Ankara YHT hanomboka ny volana Janoary; 13 any Ankara Desambra 13 Ny fitsarana ny 2018 voampanga, izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny olona 9 tao 10, dia manomboka amin'ny Janoary 13. 2020 Desambra [More ...]
Tao Aksaray, tranobe an'arivony an'arivony 90 niaraka tamin'ity teny filamatra ity hoe 'Ny fiononana ho amin'ny ho avy'; Ny minisitra Turhan dia nandray anjara tamin'ny lanonana nokarakaraina tao amin'ny Alayhan Junction Ankara-Kırşehir-Aksaray-Niğde Motorway ao anatin'ny rafitry ny fampielezan-kevitra napetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny ala. [More ...]
Ny halaviran-toerana dia hohafohezin'ny fiaran-dalamby ho an'ny haingam-pandeha ambony; Ny Programme an'ny 2020 isan-taona dia misy ny fampiasam-bola amin'ny lalamby, ary narafitra ny fandaharam-pianarana momba ny haingam-pandeha ambony (YHT). Fitaovam-pitaterana [More ...]
Mitohy ny faharatsiana miasa amin'ireo mpiasa TGS miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. Ny Sendikan'ny mpiasa an'habakabaka (Hava-Sen) dia nanambara tamin'ny fanambarana nataony fa mila mieritreritra ny mpiasa izy ireo na dia tsy sendra nahazo alàlana aza izy ireo. [More ...]
Behiç Erkin, rain'ny lalamby, dia nankalazaina tamin'ny tsingerintaona 58 nahafatesany; Tepebaşı Mayor Dt. Ahmet Ataç no mpanorina sy tompon'andraikitra voalohany amin'ny Railway Fanjakana. noho izany ny fitsingerenan'ny fahafatesana [More ...]
Ny karazan-tsarety an-jatony amina toe-javatra tsy manam-paharoa ao amin'ny Köseköy Logistics Center dia ao amin'ny Assembly; HDP Kocaeli Solombavambahoaka Ömer Faruk Gergerlioğlu nanontany ny fiampangana fa ny sarety am-polony dia tsy mandeha amin'ny Kongresöy Logistics Center People People's Democratic Party (HDP) lefitra ao amin'ny Kocaeli [More ...]
Firy ny olona hozaraina ao amin'ny Trabzon ?; Ny fivoriana voalohany an'ny kaominina Trabzon Metropolitan tamin'ny Novambra dia natao teo ambany fitarihan'ny Ben'ny tanànan'i Trabzon Metropolitan Murat Zorluoğlu. Tao amin'ny tanàna, ny rafitra «minibus» anatiny dia niakatra indray. [More ...]
Nanomboka ny sidina lamasinina Rosiana Crimean; Tamin'ny fananganana ny tetezana Crimean dia nifandray tamin'ny tanànan'ny Crimea, Moskoa ary St.Peterburg ny tanibe Russia izay antenaina hanomboka tsy ho ela. 25 [More ...]
Asphalt asa amin'ny Yedikuyular Ski Center Road; Rehefa nahavita ny asa fanitarana sy famenoana tao amin'ny arterie izay manome fitaterana mankany amin'ny Centre Ski Yedikuyular, indrindra amin'ny fivondronan'i Bertiz, i Büyükşehir dia manohy ny asfaliny. Kahramanmaras [More ...]